Mohamed Salah oo jabiyay rikoorkii gooldhalinta Liverpool ee Manchester United iyo Taariikho Cusub | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Mohamed Salah oo jabiyay rikoorkii gooldhalinta Liverpool ee Manchester United iyo Taariikho...
Maxamed Saalax ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyaytaariikhda Liverpool ee gool ka dhaliya Manchester United saddex kulan oo xiriir ah.
Weeraryahanka reer Masar ayaa naftiisa ku caawiyay inuu seddexleey ka dhaliyo Old Trafford iyadoo Reds ay xasuuqday Man United, Naby Keita iyo Diogo Jota ayaa sidoo kale shabaqa soo taabtay kulankii ay 5-0 ku badiyeen .
Goolasha Salah waxa ay u sahashay in uu rikoodho badan u direy xilli ciyaareed gudihiis kaas oo hadda u muuqda in uu 10 jeer shabaqa soo taabtay sagaal kulan oo Premier League ah, iyo 15 jeer 12 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Marka laga soo tago inuu jabiyay rikoorka kooxda isagoo dhaliyay seddex kulan oo isku xigta oo uu ku ciyaaray Old Trafford, 29 jirkaan ayaa sidoo kale noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ka soo horjeeda taariikhda Premier League ee seddexley ka dhaliya Man United.
Salah ayaa haatan gool dhaliyay todobo kulan oo isku xigta oo Premier League ah – kaliya Daniel Sturridge ayaa gool dhalin dheer oo xiriir ah u dhaliyay Liverpool tartankan.
Dhammaan tartamada, gooldhalinta Salah waxay taagan tahay 10 kulan oo xiriir ah, wax kaliya Cristiano Ronaldo , Duvan Zapata iyo Robert Lewandowski ayaa maamulay shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub tan iyo markii Salah ku biiray Liverpool 2017-18.
Previous articleWararka Suuqa Maanta: Antonio Rudiger oo ka Tagaya Chelsea, Heshiiska Paul Pogba oo La Hakiyay iyo Qodobo Kale
Next articleJUBBALAND oo fashilisay qarax lagu aasay Kismaayo
Al-Shabab oo mar kale meel fagaare ah ku toogatay dad shacab...
Romelu Lukaku oo dib ugu soo laabtay tababarka kooxda Chelsea
Manchester United Vs Villarreal: Hordhaca Kulankooda Champions league-ga Harry Maguire iyo...